मेहनतको फल निकै मिठो हुन्छ : गौतम | bethanchokkhabar.com
मेहनतको फल निकै मिठो हुन्छ : गौतम
मंगलबार, जेठ २८, २०७६ | ९:०५:२७ |
गीत गाउन सबैलाई मन पर्छ । जीवनमा धेरैको रहर हिरो बन्ने हुन्छ । त्यो नसके म्यूजिक भिडियोमा भएपनि अभिनय गर्न चाहन्छ । तर धेरैले त्यो अवसर पाउँदैनन् । सानैदेखि गित गाउन,नाँच्न र नयाँ मान्छेहरुसँग भेट्न रमाउने काभ्रेका स्थायी बासिन्दा नवराज गौतम मोडलिङ क्षेत्रमा स्थापित भैसकेका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोकका मोडल भएकाले नवराज गौतम छोटो समयमै चर्चामा आउन सफल मोडलहरु मध्ये पर्नुहुन्छ । ४० भन्दा धेरै म्युजिक भिडियोमा खेलेका गौतम अभिनयसँगै नाच्न निक्कै खप्पिस छन् । त्यसैले उनी धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् ।
पैसा हुने व्यक्ति मात्रै कलाकार बन्ने होडबाजीले कलाकारिता धमिलो बन्दै छ । तर केही राम्रा कलाकारहरु निरन्तर हरेक क्षेत्रमा सफल बन्दै छन् । उनीहरुलाई पैसाले हैन कलाले चिनाउँदै छ ।
पैसा जो सँग छ त्यो मात्र कलाकार हुने यस्तो प्रबिधिले कला भएका मान्छे पनि आउन सकेका छैन र कलाको महत्व नै छैन । आफुले रोजेको क्षेत्र भएकाले कारणले निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उनै मोडल गौतमसँगको कुराकानी
० आज भोली केमा ब्यस्त हो ?
– मेरो सानैदेखिको सपना भनेको कलाकार बन्ने हो । कलाकार बन्नको लागि मेहनत र परिश्रमको आवश्यता पर्दछ । तर पछिल्लो समय पैसा भएकाहरुले मात्रै कलाकार र मोडल बन्ने अवसर पाँउदा वास्तविक कलाकारहरुको कला मर्र्दै छ । मैले यो विचमा धेरै म्यूजिक भिडियो खेलेको छु । सबैको न्यानो माया पाएको छु ।
० सुरुका दिनहरु बारे बताउनुहोस कसरी कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भयो ?
– हरेक क्षेत्रमा मेहनत आवश्यक पर्दछ । मेहनतको फल निक्कै मिठो हुन्छ । जीवनमा सफलता हात पार्नको लागि हरेक व्यक्तिमा निक्कै मेहनत आवश्यक पर्दछ । मेहनतको फल निक्कै मिठो हुन्छ ।
तर हरेक क्षेत्रमा पैसाले प्रभाव पार्ने गरेको छ । पैसा हुने व्यक्ति सिधै कलाकार बन्ने परिपाटीको कारणले राम्रा र कला बुझेका कलाकारहरु निरन्तर यो क्षेत्रवाट पलायन हुँदै गएका छन् । मलाई सुरुको समयमा निक्कै गाह्रो भयो । सानैदेखिको चाहना कलाकारितामा लाग्ने थियो । सो कुरालाई पुरा गर्ने अवसरको रुपमा यो क्षेत्रमा संर्घष सुरु गरे ।
सुरुको दिनमा निकै गाह्रो भयो आफुसँग यदि कला छ भने पनि गर्न गाह्रो थियो । पैसा जो सँग छ त्यो मात्र कलाकार हुने यस्तो प्रविधिले कला भएका मान्छे पनि आउन सकेका छैन । कलाको महत्व नै छैन । निकै गाह्रो भयो सुरुमा डान्स सिके , डान्स सिक्दा निकै गाह्रो हुन्थ्यो । दुनियाले बरालिएर हिड्यो भन्दै कुरा काट्ने गर्थे । कोरस नाच्न जादा बेलुका फर्किने बेलामा गाडडी नपाएर समस्या पनी परेको थिए । तर मैले आफ्नो दुख गरेर यो अवस्था आए । अहिले राम्रो काम गरेको भनेर प्रतिक्रिया आउने गरेको छ । मैले धेरै दुख कष्ट सहेर यो क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।
० यस क्षेत्रमा लाग्नको लागि घर परिवार बाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ ?
– मलाई मेरो घर परिवारको सहयोग नभएको भए । यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ननै सक्दैनथे । मेरो परिवारको मेरो भावना बुझेकै कारणले यो क्षेत्रमा यसरी प्रवेश पाएको हो । मैले पाएको दुख भोली सुखमा परिर्वतन हुन्छ भनेर मेरो घर परिवारले गरेको सहयोगको कारणले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । मैले सफलता हात पार्दैै छु ।
० तपाईंले मोडलिङ गरेको सबैभन्दा चर्चाको गित कुन हो ?
– चर्चा पनि खर्चमा देखिन भयो । चर्चाको लागि बुष्ट अनिवार्य जस्तै भयो । प्रायःआजकाल बुष्ट गर्ने जमाना चलेको छ । बुष्ट बिना माया पाउन भन्ने गीत चर्चामा रहेको छ । तर म कत्तिको सन्तुष्ट छु वा छैन भन्ने कुरा हो । मैले अभिनय गरेको गितहरु कत्तिको चर्चित छन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।
गित संगित मेरो लक्ष्य हो । मेरो चाहना हो । तर घरपरिवार चलाउने भनेको मेरो साइड जभले हो । मैले मेरो परिवार चलाउनको लागि छुट्टै जागिरको गरेको छु । गित संगितवाट बाँच्ने आधार धेरै छ । तर हामीले कस्तो खालको कलाकारिता गर्ने हो । त्यसमा निर्भर रहन्छ ।
० एउटा सफल मोडल हुनको लागि के के कुराको आवश्यकता पर्छ केके गुण हुनु पर्छ ?
– कलाकार हुनलाई राम्रो अभिनय र डान्स लाई एकदमै खारिएर आउँदा राम्रो हुन्छ । जबरजस्ती पैसा हालेर कलाकार नबन्नु होला । राम्रो सँग अभिनय र डान्स सिकेर आऊनु होला भन्न चाहन्छु । मैले पनि धेरै दुख गरेको छु मैले ५० भन्दा धेरै म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेको छु । त्यसको लागि धेरै दुख कष्ट गरेको छु । नयाँ आउने साथीहरुले पनि कम्तिमा गित संगितको मर्म बुझेर यो क्षेत्रमा आउन अनुरोध गर्दछु ।
० चार तिर काम गर्नु हुन्छ समय कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
ब्यापार ब्यबसाय र कलाकार क्षेत्र सँगै अगाडि लागिरहेको छु । गीत सँगीत गर्ने बेलामा भाईले पालो दिन्छ । यसै गरी चलिराको छ । त्यसको साथै मलाई मेरो परिवारको सहयोग गरेको छ ।
– मेरो विवाह भएको छैन । मेरो करियर बनेपछि मात्रै विहे गर्ने योजना रहेको छ ।
० तपाईंले आफुलाई लायकको केटि हेर्नुपर्ने भयो भने कस्तो टाईपको हेर्नू हुन्छ ?
भाग्यमा के छ त्यो हुने हो । तर श्रीमती भनेको मेरो फिल्ड बुझेको मलाई बुझ्ने खालेको होस भन्ने चाहना मेरो छ । मैले पनि उसलाई बुझेको होस भन्ने मेरो चाहना छ ।
– आफुसँग राम्रो कला हुदा पनि अवसर नमिल्ने र गर्नु पर्यो भने पैसै हाल्नु पर्ने बाध्यता छ । एउटा राम्रो कला भएको व्यक्ति ले अबसर पाओस । आफ्नो कला चिनेर आउनुहोला भन्न चाहन्छु । कला क्षेत्रमा आज भोलि धेरै बिकृति आएको छ । यस्तो नहोस् कला क्षेत्र लाई सबैले सम्मान गर्नु पर्छ ।
– कलकारिता जस्तो सुन्दर क्षेत्र लाई नबिगर्नु यसको इज्जत गर्नु जसले हामीलाई कलाकार भनेर चिनाउछ । तपाईं लगाएत तपाईंको मिडिया लाई मेरो मनको कुरा राख्न दिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु ।